Izinzuzo nobubi bama-valve ahlukahlukene - i-China Like Valve (Tianjin)
Ubuhle nobubi bama-valve ahlukahlukene
1. I- Isango valve yesango ibhekise ku-valve ilunga lokuvala (i-RAM) elihamba liqonde ohlangothini oluqondile lwe-eksisi yesiteshi. Isetshenziswa kakhulu njengendawo yokusika epayipini, okusho ukuthi, kuvulwe ngokuphelele noma kuvaliwe. Ngokuvamile, ama-valve esango awasetshenziswa njengokulawula ukugeleza. Ingasetshenziselwa ukucindezela kokushisa okuphansi noma ukushisa okuphezulu nokucindezela okukhulu, futhi kungenziwa ngezinto ezahlukene ze-valve. Kepha i-valve yamasango ayisetshenziswa kakhulu emapayipini ahambisa udaka kanye neminye imidiya
① Ukumelana noketshezi kuncane;
② I-torque edingekayo ukuvula nokuvala incane;
③ Ingasetshenziswa kulayini wepayipi lenethiwekhi elinokugeleza okuphakathi okuya ezinhlangothini ezimbili, okungukuthi, ukuqondiswa kokugeleza kwaphakathi akukhawulelwe;
④ Uma kuvulwe ngokuphelele, ukuguguleka kwendawo ebekwa uphawu ngokusebenza okuncane kuncane kune-stop valve;
Ukwakheka komzimba kulula futhi ubuchwepheshe bokukhiqiza bungcono;
Structure Ubude besakhiwo bufushane.
① Ubukhulu bangaphandle nobude bokuvula bukhulu, futhi isikhala sokufakwa sikhulu futhi;
The Ngenkathi yokuvula nokuvala, indawo yokubekwa uphawu ingqubuzana impela, futhi ukungqubuzana kukhulu, noma kulula ukudala into yokuhuzuka ekushiseni okuphezulu;
③ Ngokuvamile, ama-valve esango anezindawo ezimbili zokuvala uphawu, ezengeza ubunzima ekucubunguleni, ekugayeni nasekugcineni;
Isikhathi sokuvula nokuvala sinde.
2. I- butterfly valve : ivelufa levemvane yi-valve esebenzisa izingxenye zediski zokuvula nokuvala izingxenye ukubuyela emuva naphambili cishe ngama-90 ° ukuvula, ukuvala nokulungisa indawo enamanzi.
Has Inesakhiwo esilula, ivolumu encane, isisindo esincane nokusetshenziswa okuphansi, futhi ayisetshenziswanga ku-valve enkulu yokulinganisa;
② Ukuvula nokuvala kuyashesha, futhi ukumelana nokugeleza kuncane;
Can Ingasetshenziswa endaweni emaphakathi nezinhlayiya eziqinile ezimisiwe, futhi ingasetshenziswa kwimpuphu nakwabezindaba abayimbudumbudu ngokuya ngamandla wokubekwa uphawu komhlaba. Ingasetshenziselwa ukuvulwa nokuvalwa kwamapayipi okungena komoya nothuli, futhi isetshenziswa kabanzi emapayipini egesi nasemizileni yamanzi yensimbi, imboni elula, amandla kanye nezinhlelo ze-petrochemical.
Range Ibanga lokulawulwa kokugeleza alilikhulu, lapho ukuvulwa kufinyelela ku-30%, ukugeleza kuzongena ngaphezu kwe-95%;
② Ngenxa yomkhawulo wesakhiwo sevevemvane nokwakheka kwempahla, ayifanele ukushisa okuphezulu nohlelo lwamapayipi wokucindezela okukhulu. Izinga lokushisa elijwayelekile lingaphansi kwama-300 ℃ ne-PN40;
③ Ukusebenza kokufaka uphawu kubekwe kabi uma kuqhathaniswa ne-valve yebhola ne-stop valve, ngakho-ke akuphezulu kakhulu ukubekwa uphawu.
3. Ball valve : it savela valve ipulaki. Izingxenye zalo zokuvula nokuvala ziyisigaxa, esingavulwa futhi sivalwe ngokuguqula ibhola libe ngama-90 ° lizungeze i-eksisi yesiqu. I-valve yebhola isetshenziswa kakhulu kupayipi ukusika, ukusabalalisa nokuguqula ukugeleza kokuhamba kokuphakathi. I-valve eyenzelwe njengokuvulwa okwenziwe ngo-V nayo inomsebenzi omuhle wokuhamba kokugeleza.
Resistance Ukumelana nokugeleza kungaphansi kakhulu (empeleni kungu-0);
Can Ingasetshenziswa kuketshezi lokubila eliphakathi nendawo nelibilayo ngokuthembekile ngoba ngeke linamathele ekusebenzeni (lapho kungekho igrisi);
③ Ebangeni lengcindezi nezinga lokushisa, ukubekwa uphawu kungabonakala ngokuphelele;
Can Ingabona ukuvulwa nokuvalwa okusheshayo, futhi isikhathi sokuvula nokuvala kwezinye izakhiwo kungama-0.05-0.1s kuphela, ukuze kuqinisekiswe ukuthi ingasetshenziswa ohlelweni lokuzenzekelayo ebhentshini lokuhlola. Lapho i-valve ivulwa futhi ivalwa ngokushesha, ukusebenza akunamphumela;
⑤ Izingxenye zokuvala ibhola zingatholakala ngokuzenzakalela endaweni yomngcele;
⑥ Umsebenzi osebenzayo uvaliwe ngokuthembekile ezinhlangothini zombili;
⑦ Uma ivulwe ngokuphelele futhi ivalwe ngokuphelele, indawo ebekwa uphawu yebhola nesihlalo ihlukanisiwe nendawo, ngakho-ke ophakathi odlula ku-valve ngejubane elikhulu ngeke abangele ukuguguleka kwendawo yokuvala;
⑧ Ithathwa njengesakhiwo esikahle kakhulu se-valve sohlelo oluphansi lokushisa oluphakathi ngenxa yesakhiwo salo esihlangene nesisindo esincane;
Body Umzimba we-valve ulinganiselwe, ikakhulukazi isakhiwo somzimba we-valve esine-welding, esingathwala ingcindezi ephuma kahle kumbhobho;
⑩ Izingxenye zokuvala zingamelana nokwehluka kwengcindezi enkulu lapho kuvalwa. (11) i-valve yebhola enomzimba we-valve oshiselwe ngokuphelele ingangcwatshwa ngqo ngaphansi komhlaba, okwenza ukuthi abangaphakathi be-valve bangabi nokugqwala, futhi impilo esezingeni eliphakeme kakhulu ingafinyelela eminyakeni engama-30, eyi-valve ekahle kakhulu yamapayipi kawoyela negesi yemvelo.
① Ngenxa yokuthi indandatho yokuvala uphawu eyinhloko yesihlalo se-valve yi-polytetrafluoroethylene, inert cishe kuzo zonke izinto zamakhemikhali, futhi inezici zokulingana okuncane kokungqubuzana, ukusebenza okuzinzile, akulula ukuguga, ukusetshenziswa okuhlukahlukene kokushisa nokusebenza okuhle kokubekwa uphawu. Kepha izakhiwo zomzimba ze-polytetrafluoroethylene, kufaka phakathi i-coefficient ephezulu yokukhulisa, ukuzwela kokugeleza kwamakhaza kanye nokuqhuba okungahambi kahle kokushisa, kudinga ukwakheka kwesihlalo sesihlalo ukuba kube nalezi zici. Ngakho-ke, lapho okokufaka uphawu kuba nzima, ukuthembeka kophawu kuyabhujiswa. Ngaphezu kwalokho, ukumelana namazinga okushisa kwe-polytetrafluoroethylene kuphansi, futhi kungasetshenziswa kuphela ngaphansi kwesimo esingaphansi kuka-180 ℃. Ngaphezulu kwaleli zinga lokushisa, izinto zokuvala zizoguga. Kepha uma ubheka ukusetshenziswa kwesikhathi eside, kuzosetshenziswa kuphela ku-120 ℃.
Performance Ukusebenza kwayo okulawula kubi kakhulu kunalokho kwe-stop valve, ikakhulukazi i-valve yomoya (noma i-valve kagesi).
4. Misa i-valve : kubhekiswa ku-valve ilunga lokuvala (idiski) elihamba ngasolayini wesihlalo. Ngokuya ngokuhamba kwediski, ushintsho lokuvulwa kwesihlalo se-valve lilingana ne-disc stroke. Ngoba ukushaywa kokuvulwa noma kokuvalwa kwesiqu se-valve kufushane, futhi kunomsebenzi wokusika onokwethenjelwa kakhulu, futhi ngoba ushintsho lokuvulwa kwesihlalo se-valve lilingana ngqo nokushaywa kwe-valve disc, ilungele kakhulu elawula ukugeleza. Ngakho-ke, lolu hlobo lwe-valve luhamba kakhulu ukubambisana ekusikeni noma ekulawuleni nasekuphothweni.
The Enqubeni yokuvula nokuvala, ukungqubuzana phakathi kwediski nendawo yokubekwa komzimba yomzimba we-valve kuncane kunalokho kwe-valve yesango, ngakho-ke ayikwazi ukumelana nokugqoka.
② Ukuphakama kokuvula kungu-1/4 kuphela wesiteshi sesihlalo se-valve, ngakho-ke kuncane kakhulu kune-valve yesango;
③ Ngokuvamile, kunendawo eyodwa kuphela yokufaka uphawu emzimbeni we-valve naku-disc, ngakho-ke inqubo yokukhiqiza ingcono futhi kulula ukuyigcina;
④ Ngenxa yokuthi i-filler iyinhlanganisela ye-asbestos ne-graphite, ukumelana nokushisa kuphakeme. Ngokuvamile, ama-stop valve asetshenziselwa ama-valve evuthayo.
① Ngenxa yokuthi ukugeleza kokuhamba okuphakathi nendawo kushintsha i-valve, ukumelana kokugeleza okuphansi kwe-stop valve kuphakeme kakhulu kuneziningi ezinye izinhlobo zama-valve;
② Ngenxa yesifo sohlangothi eside, isivinini sokuvula sihamba kancane kunaleso se-valve yebhola.
5. I- plug valve : ibhekisa ku-valve ejikelezayo enezingxenye zokuvalwa okwenziwe nge-plunger. Ngokuzungeza okungu-90 °, imbobo yesiteshi ku-valve valve ixhunyiwe noma yehlukanisiwe ethekwini lesiteshi emzimbeni we-valve, ukuze ibone ukuvulwa noma ukuvalwa. Ipulagi ingaba sesimweni esiyindilinga noma esiyindilinga. Isimiso sifana naleso se-valve yebhola. Ball valve ithuthukiswa ngesisekelo plug valve, okuyinto ikakhulukazi esetshenziselwa uwoyela field ukuxhashazwa kanye petrochemical umkhakha.
6. I- valve yokuphepha : ibhekisa kudivayisi yokuvikela ukucindezelwa ngokweqile kumkhumbi wokucindezela, okokusebenza noma kwepayipi. Lapho ingcindezi entweni yokusebenza, umkhumbi noma ipayipi iphakama ngaphezu kwenani elivumelekile, i-valve izovuleka ngokuzenzekelayo bese ikhipha ngobuningi bayo ukuvimba okokusebenza, umkhumbi noma ipayipi kanye nengcindezi ekukhuleni ngokuqhubekayo; lapho ingcindezi yehlela enanini elicacisiwe, i-valve izovalwa ngokuzenzakalela futhi ngesikhathi esifanele ukuvikela ukusebenza okuphephile kwemishini, umkhumbi noma ipayipi.
7. Umgibe we-Steam : phakathi kwesitimu nomoya ocindezelweyo, kuzoba khona okwehlisayo okwakhiwe. Ukuqinisekisa ukusebenza kahle nokuphepha kocingo, le midiya engenamsebenzi futhi eyingozi kufanele ikhishwe ngesikhathi ukuqinisekisa ukusetshenziswa nokusetshenziswa kocingo. Inemisebenzi elandelayo: ① ingasusa ngokushesha i-condensate ekhiqiziwe; ② ukuvimbela ukuvuza kwesitimu; Air qeda umoya nenye igesi engavimbeki.
8. Ingcindezi yokwehlisa ingcindezi: yi-valve enciphisa ingcindezi yokungena ekucindezelweni okuthile okudingekayo ngokulungisa, futhi ithembele emandleni endawo uqobo ukugcina ingcindezi yezitolo izinzile ngokuzenzekelayo.
9. Hlola i-valve : eyaziwa nangokuthi i-counter-flow valve, i-valve yokuhlola, i-valve yangemuva yangemuva kanye ne-valve yendlela eyodwa. La ma-valve avulwa ngokuzenzakalela futhi avaleke ngamandla akhiqizwa ukugeleza kwephayiphi eliphakathi uqobo, futhi kungokwe-valve ezenzakalelayo. I-valve yokuhlola isetshenziswa ohlelweni lwamapayipi, umsebenzi wayo omkhulu ukuvimbela ukugeleza emuva okuphakathi, ukuvimbela ipompo nokushayela imoto ekuhlehliseni, nokukhishwa kwaphakathi kwesitsha. I-valve yokuhlola nayo ingasetshenziselwa ukunikezela ngohlelo olusizayo ngengcindezi engaphezulu kwengcindezi yohlelo. Ingahlukaniswa ngohlobo lwe-swing (ujikeleza ngokuya ngesikhungo samandla adonsela phansi) nohlobo lokuphakamisa (ukuhamba eduze kwe-axis).
Isikhathi sokuthumela: Mar-31-2021